Mpanamboatra sy mpamatsy serivisy ampiana Wholesale | Ara-potoana
Agent Agent Dropshipping
Fanaterana ny lalamby
Fandefasana haingana ny fandefasana sambo-drivotra iraisam-pirenena - Se ...
Mpivarotra ambongadiny ny vahaolana fiaramanidina - Express ...
100% entana any am-boalohany Euro - 2019 kalitao C ...
Ambongadiny sinoa any Etazonia - Express - O ...
OEM namboarina ho mpandefa entana sy handefa vola - FBA ...
Factory ambongadiny iraisam-pirenena FedEx express - 201 ...
Serivisy miampy sanda Ampiasao ny serivisy ampiasainay hananganana ny marika anao! Fampiroboroboana ny marika 1. Azafady ampidiro ny sisin-tsoratry ny marketing ary tazomy ny mpanjifanao. 2. Famerenana amin'ny laoniny ny vokatra ao anaty fonosana namboarina ...
Serivisy ampiana lanja
Ampiasao ny serivisy ampiana lanja anay hananganana ny marika anao!
Fampiroboroboana ny marika
1. Azafady ampidiro ny sisin-dàlana amin'ny marketing ary tazomy ny mpanjifanao.
2. Avereno amboarina ao anaty boaty fonosana namboarina amin'ny fomba tianao indrindra ny vokatra.
3. Ny fametrahana sy ny fanangonana dia afaka manatsara ny rojom-panomezanao ary manamora ny fizotry ny fizarana.
4. Ny fanoratana anarana dia dingana manahirana nefa manan-danja, ka horaisinay ho anao izany ary apetrakao amin'ny fomba mety ny marika mba hahazoana antoka fa hita ny vokatrao.
Amin'ity tsena miova haingana ity dia miha-fohy kokoa ny tsingerin'ny ain'ny vokatra, afaka misafidy marika isan-karazany ny mpanjifa, ny fotoana an-tsena dia tena zava-dehibe, izay hamaritra ny fahombiazan'ny orinasa.
GZ Ontime Supply Chain Services (SCS) dia manome serivisy fanomezana farany ho an'ny OEM (Orinasa mpanamboatra fitaovana), ODM (mpanamboatra endrika am-boalohany), EMS (mpanome serivisy mpanamboatra elektronika) ary mpanamboatra singa elektronika hahafahan'izy ireo manatsara ny famatsiana azy rojo.
Amin'ny maha-mpaninjara eran-tany antsika, ny karatra misy ny tsipika malalaka dia manome ny mpanjifa traikefa "iray-tokana" amin'ny famolavolana sy ny filan'ny famahanana. Ny fahaiza-manao sy ny fitaovana ampiasain'ny ekipanay mpamatsy dia mamela anao hampihena ny vidin'ny fividianana fitaovana, hampitombo ny kapitalanao, ary hankafy ny fahafaha-manangona fitaovana hanan-tombo amin'ny fizarana sy ny tombom-barotra.
Serivisy momba ny fandoavam-bola sy vola
Serivisy misahana ny fandoavam-bola
Afaka manome anao serivisy fandoavam-bola maimaim-poana izahay.
1688.com/taobao.com/jd.com serivisy mpivarotra fiantsenana
Mifandray amin'ny mpivarotra izahay ary mifampiraharaha amin'ny varotra ho anao
Taobao sy tranokala sinoa hafa dia tsy manaiky PayPal! Izahay dia mamela anao handefa fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny PayPal, ary avy eo dia hampiasa mpanome fandoavambola sinoa izahay handoavana ny mpamatsy! Omeo fiarovana bebe kokoa ianao rehefa mividy amin'ny mpamatsy sinoa!
Amin'ny fampiasana ny traikefa fiantsenana Taobao an-taonany maro dia hanome anao toro-hevitra momba ny fahombiazan'ny mpivarotra sy ny toro-hevitra Taobao hafa izahay ...
Azonay omena anao ny fividianana vokatra, ny masoivoho, ny fizahana, ny fitaterana manerantany, raha mila izany ianao dia afaka manome tolotra hafa anao.
Teo aloha: Agent Agent Dropshipping
Adiresy: Guangzhou Ontime
Ireo mpivarotra siansa dia miresaka ny tombotsoan'ny F ...
Lalam-by vaovao mankany Eropa
Nahazo famatsiambola ...
Fanadihadiana laharana fonosana
Ampidiro azafady ny nomeraonao fonosana
Atombohy ny fanarahana